रोनाल्डोको सेक्रेट डाइट: भात नभई हुँदैन, सँगै खान्छन् यी चिज पनि ! - साँचो खबर Online Khabar
रोनाल्डोको सेक्रेट डाइट: भात नभई हुँदैन, सँगै खान्छन् यी चिज पनि !
२०७८ अषाढ १३, आईतबार (३ महिना अघि)
एजेन्सी – पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफूलाई फिट राख्न धेरै नै मिहिनेत गर्छन्। रोनाल्डो दैनिक व्यायाममा मात्र नभई आफ्नो खानपानमा पनि धेरै अनुशासित रहने गर्छन्। रोनाल्डोले गर्ने कडा मिहिनेत र अनुशासित खान-पानका बारेमा विश्वभर चर्चा हुनेगर्छ।
रोनाल्डो आफूलाई फिट राख्न के-के खान्छन् भन्ने कुरामा धेरैको चासो रहने गरेको छ। लगातार वर्षौं देखि उच्च स्तरको फुटबल खेल्दै आएका उनी दैनिक जस्तो ब्रोकाउली, कुखुराको मासु र भात खान्छन्।
रोनाल्डोले सधैं यहि खाने गरेको युभेन्ट्सका युवा सहकर्मी डाउवडा पिर्टस बताउँछन्। युभेन्टसको युवा टोलीका सदस्य भएको बाबजुत गत सिजनमा रोनाल्डोसँगै ट्रेन गर्ने मौका पाएका पिर्टस रोनाल्डोको गोप्य डाइटको खुलासा गरेका हुन्।
एक अन्तर्वार्ताका क्रममा पिर्टसले रोनाल्डो दिनहुँ ब्रोकाउली, कुखुराको मासु र भात खाने गरेको बताए। रोनाल्डो हरेक दिन यहि खाने उनको भनाई छ। उनका अनुसार रोनाल्डो आफ्नो डाइटमा खासै परिवर्तन गर्दैनन्। पिर्टसले भने,”उनी सधै एउटै चिज खान्छन् : ब्रोकाउली, कुखुराको मासु र भात”
पिर्टसका अनुसार रोनाल्डो धेरै भन्दा धेरै पानि पिउँछन्। सोडा, कोकाकोला जस्ता चीज रोनाल्डोले छुँदै नछुने गरेको पिर्टसको भनाई छ। उनी भन्छन्,”उनी सोडा छुँदैनन् र सधैं पानी पिइरहेका हुन्छन् । समय समयमा पानी पिउँछन् र कोकाकोला कहिल्यै पिउँदैनन्।”